China Silicon Carbide SIC Mugadziri uye Mutengesi | Anteli
Iyo nhema nhema yekristaro yesilicon carbide ine huwandu hwakakura hunogadzirwa mune yedu chirimwa inogadzirwa kubva yakachena kuchena quartz jecha uye petroleum coke. Izvo zvigadzirwa zvinonyungudika kuburikidza neepamusoro tembiricha inosvika 2500C mune yemagetsi choto. Izvo zvigadzirwa zvine kukwirira kwakasimba kwakanaka kwekupisa kwemafuta kupfeka kuramba, kupisa kwemwaranzi, kupisa kwemagetsi, uye kugona kwakanaka kwemagetsi uye kupisa, uye anoshandiswa zvakanyanya muinjiniya, kemesitiri, zvemagetsi, simbi uye maindasitiri ekudzivirira. Kambani yedu inogona kuburitsa akasiyana saizi yesilicon carbide, zvinoenderana neyenyika uye epasi rose zviyero GB, ISO, ANSI, FEPA, JIS, nezvimwe.
Silicon carbide (SiC), inozivikanwawo secarborundum, inhengo yesilicon uye kabhoni ine kemikari fomati SiC. Izvo zvinoitika muhunhu seyakanyanya kushomeka mamineral moissanite. Synthetic silicon carbide powder yakave yakagadzirwa-yakawanda kubva muna 1893 kuti ishandiswe sehasha. Zviyo zvesilicon carbide zvinogona kusunganidzwa pamwe nekukanya kuti zviumbike zvakaomarara zvakanyanya izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mukushandisa kunoda kutsungirira kwakanyanya, senge mabhureki emota, makutu emota uye mahwendefa eeceramic mune zvipfeko zvinodzivirira. Zvemagetsi zvinoshandiswa nesilicon carbide senge mwenje-inoburitsa diode (maUS) uye ma detectors mune ekutanga maredhiyo zvakatanga kuratidzwa kutenderedza 1907. SiC inoshandiswa mune semiconductor zvigadzirwa zvemagetsi zvinoshanda patembiricha yakakwira kana kwakakwira volti, kana ese ari maviri. Makristasi akakura akasarudzika eesilicon carbide anogona kukura nenzira yeLely; dzinogona kutemwa mumatombo anozivikanwa se synthetic moissanite. Silicon carbide ine yakakwira nzvimbo nzvimbo inogona kuburitswa kubva kuSiO2 iri mune yekudyara zvinhu.
(1) Huru yekunyunguduka kwevira, yakareba nguva yekunyungudika, inotungamira kune akawanda makirisito, makristasi mahombe, kuchena kwakanyanya uye kushoma kushoma mukugadzira Silicon carbide.
(2) Hunhu hweSilicon carbide: Hukukutu hwakanaka, hupenyu hwakareba.
(3) Makemikari akagezwa uye mvura yakashambidzwa kuchena kwakanaka.
(4) Yakakosha kurapwa kweSilicon carbide inowana kuchena kwakanyanya, kusimba kuri nani, uye zvirinani kukuya kuita.
Silicon carbide inogona kushandiswa senge metallurgical deoxidizer uye yakanyanya kupisa tembiricha zvinhu mukunyungudika.
Silicon carbide inogona zvakare kushandiswa seyakaomesa zvinhu, iyo inogona kushandiswa kugadzira maturusi ekushandisa, sekukuya mavhiri, matombo emafuta, kukuya musoro zvichingodaro.
Silicon carbide iri mhando nyowani yakasimbiswa yesimbi yekugadzira deoxidizing mumiririri uye yakanaka yekupisa inodzivirira mumiriri.it inoshandiswa kune deoxidizing. Iyo yekushandisa dhizaini ndeye 14kg / t inogona kuita magetsi kushandisa kudzikisa 15-20kw / h uye nguva yekudzikisa 15-20min pavira rega kusimudzira huwandu hwezvigadzirwa kusvika 8-10%.
Pashure: Yakagadzirwazve Silicon Carbide Micro poda
Zvadaro: Sintered nesilicon Carbide Micropowder Green
Beta nesilicon Carbide Nanopowder
Nhema Silicon Carbide Powder Mutengo Sic Powder
Penyai Tube Uye Heat Exchangers
Super Yakaisvonaka Powder Silicon Carbide Zvigadzirwa